Syabas, rakyat for supporting Pua. Loser Syabas ;)
Santa Claus Came In July!
Berita Inikah Membuatkan YB UMNO Trauma & Mengamuk Melihat Bendera PAS?
Korean Olympic Girls’ (Generation)
What is Myammar Muslim (Proposal to Change 1982 Myanmar Citizenship Act) in Myanmar
Posted: 18 Jul 2012 08:35 AM PDT
Syabas, rakyat Selangor for supporting your wakil rakyat, Tony Pua .
Unable to take criticism, you had to sue. Shame on you, Syabas.
May Malaysia have wakil rakyat who will always fight for the rights of her people.
PETALING JAYA, July 17 — The "RM1 for Water Rights: 100,000 Malaysians Support Tony Pua vs Syabas" online campaign in support of DAP federal lawmaker Tony Pua has announced that they have managed to collect more than RM150,000 from their online campaign.
"By the end of the online campaign, we have managed to collect RM150,939," said the campaign's organiser, Yeo Bee Yin tonight.
"And so, I would like to announce the total amounts of the campaign. As announced earlier by Bee Yin, we managed to collect RM151,000. The dinner has managed to collect RM173,000. And the donation has managed to collect RM22,400. This is an overall total of RM310,000," he announced.
Posted: 18 Jul 2012 11:01 AM PDT
"Bukanlah mustahil jika satu hari kelak tuntutan dibuat untuk menghapuskan Sistem Beraja sama sekali walau apa pun yang diperuntukan oleh Perlembagaan," kata Mahathir.
"Akibat pindaan, kuasa kehakiman mahkamah-mahkamah telah dikurangkan dan mereka hanya mempunyai kuasa apabila diberikan Parlimen," kata Mohd Dzaidin, dan menambah bahawa "Parlimen lebih hebat daripada badan kehakiman."
Beliau berkata, Dr Mahathir sebenarnya sangat bijak "membunuh dua ekor burung dengan seketul batu".
The following post by KJ John is from Malaysiakini at this link. KJ JOHN was in public service for 29 years. The views expressed here are his personal views and not those of any institution he is involved with. I am reposting it to share it with readers who have yet to subscribe to Malaysiakini. You can do so HERE.
-written by KJ John-
I amaproud former Administrative and Diplomatic Service (PTD) officer. I thoroughly enjoyed my service asaPTD officer when in the public services. In our day we were taught to assume the role and responsibility of policy advisers to the minister to whom we were fully accountable to. Therefore, during our time, when the minister, for example, said, "Jump," we would not just ask, "how high?" but instead ask "why not run, or walk, or skip?"
I get the feeling, from today's kind and quality of decisions being made, that most officers only proffer the minister three options on simply how to jump, instead of alternative policy options which include "the walking and skipping or running". Therefore, today's options are what I call "project-management options but not policy consideration options".
Any such policy option would also stipulate the intended outputs of the agenda, some interpretation or evaluation of the potential impact, and even some plausible outcome related considerations with views about them.
My greatest fear today is that this kind and quality of public policy analysis is not fashionable any more. More fashionable are MBA-type project management potential costs and benefits calculation, but with all assumptions based on project level extrapolations which cannot be concretely tested or verified.
And when all these are reduced to numbers withabottom line, they aid decision-making withoutafull review of all longer term considerations. Therefore, whether we call such projects PKFZ or the Cowgate or Syabas water supply; the so-called Public Policy Analysis stinks and therefore there is much that is rotten in the state of Malaysia!
Therefore and consequently, I am rather amused that the out-going public services chief was dismissed from his job and he apparently does not even know the reason. How can this be?
Usually, it is the Civil Services Department (JPA) which recommends persons considered for new appointments; especially by promotion.
Therefore, I am totally confused that the chief himself does not know why he was suddenly terminated. Who gave this instruction and who determined and signed the letter of termination to the chief? He was the one who usually signs all such letters to others?
Most incompetent decision ever made
If it is as reported, I must say that this singular decision to remove the JPA chief must be the most incompetent decision ever made, if the incumbent genuinely did not know why and for what reasons he was being terminated.
I know that the new salary scheme was introduced and has since been withdrawn. I am one of the so-called potential beneficiaries, through my pension payments. Even if that was so, and even if the JPA chief had opted into this new scheme, I believe he was only 57 years of age and I think the mandatory retirement age has already been extended to 58?
The last timeasenior officer of the rank of secretary-general was removed rather abruptly without justification was when an incumbent of the Finance Ministry portfolio was dismissed. I understand this was because the person publicly (even if inaclosed meeting) disagreed with the then prime minister about the way forward the financial and currency crisis was handled in 1998.
It was simplyamatter of differences in policy options-type of disagreement and it was fair and justified for the incumbent to leave as he was also already on contract by then. Presumably thenanormal one-month notice is fine.
Arbitrary and non-rational decision-making is one of the most critical problems facing policy making today. The head of the JPA is always appointed by the Public Services Commission.
The nature and form of consultation and considerations are usually not specified but one thing is always clear. The head of JPA isavery senior appointment and it must be cleared and approved by the Cabinet but the actual appointment must always be made by the Public Services Commission.
Only the appointing authority can 'dis-appoint'
Likewise the federal constitution is also clear that no authority or body more junior in rank or status than the Public Services Commission can "remove the incumbent JPA head". This is simply because the federal constitution stipulates that only the appointing authority can similarly "dis-appoint!"
Therefore, these are my questions on the incumbency of the Head of JPA and why he was removed:
Did SPA, asaPublic Services Commission, deliberate and seekaconsensus on this case before he was told to retire? When was that meeting held?
Was the incumbent not initially appointed by the SPA? If so, what criterion and factors were considered in that appointment? Did those factors and consideration suddenly disappear now?
Usually there is positive vetting for the suitability of the holder for the post of the head of JPA. Was this done in this incumbent's case? Was it not evident in quiteafew Auditor-General's Reports that the same incumbent was cited for failures as the Defence Ministry's controlling officer?
I understand that he may have failed in his duties in the conduct and performance of "the salary review" which was finally aborted, but what was the due process for the terms of reference or ToR and subsequent appoint of the review committee? Was he alone in this committee? If not, are the others being equally punished for the same failure? Was the cabinet not involved in the approval of the said "new salary policy" before it was announced for execution? How could have the Pensions Division make payments to pensioners on the new scheme if the cabinet had not approved the policy and therefore payments? Why was the federal cabinet not then held equally liable for the same failures as the incumbent who only made the recommendations? Is this not the Ling Liong Sik argument in court?
I think the SPA must come clean and clarify why the incumbent was removed and what were his failures and also admit if they failed in making the appointment in the first place.
Personally I think it is high time for the public services in Malaysia to be raised to another level of efficiency and effectiveness. All secretaries-general are important policy advisers to any government of the day; and they must all serve without fear or favour. We must move beyond the "Yes Sir three bags full syndrome;" wherein the minister is always right and the policy adviser apparently redundant.
Can someone come clean and clear the name of the former head of JPA so that he and all Malaysians can know why he was asked to terminate his services to the government of Malaysia? And, by the way, what did it cost the tax-payers for this arbitrary decision?
It has beenaglorious day for me!! The day started withaViber call from my girlfriend who was my bridesmaid in 1983.
"What's your shoe size?" she asked.
*UK size 8 and US size9or 9.5, it all depends," I replied."Why?"
She went on to explain that she had boughtapair of Salomon shoes online but they had sent her the wrong size and she wanted to give it to me if it fits.
Happily, I told her that I was in KL last weekend and had boughtadress without trying it as I was hard pressed for time. Since it was size 42, I was quite confident that I could wear it but to my disappointment, I could not zip it fully. Also, I boughtawhite lacy top forastudent whom I had been coaching for 10.5 yrs asa16th birthday present but she did not like it so I could also give both items to her.
I was supposed to swing by her home on the way to meet some people for lunch but I was delayed as I had to try three dresses before I was satisfied I looked reasonably presentable. After all, I was meeting my two close relatives and another beautiful friend who was Miss Malaysiaafew years ago.
My cousin was the one who had been encouraging me for years to lose weight and finally, his advice bore fruit as I lost 29 pounds but maintaineda26 pound loss for5months. Sadly, I gained2pounds over the weekend. Anyway, I was absolutely thrilled when he said he would give meaone-year gym membership at the latest gym in town asapresent!!! After lunch at the PSC, we went to the gym where I hadaguided tour and signed up. So, I believe I will lose more pounds and more importantly, tone my body forafitter,slimmer and healthier me! Quiteanumber of my friends are fitness freaks, marathon runners, gym addicts and have 6-pack abs (ladies and gentlemen included) so that's another reason for my commitment to health and fitness. I am definitely the heaviest and most unfit of all!
On my way home, I swung by my bridesmaid's house and voila - the shoes fitted me beautifully and the dress and blouse looked beautiful on her! *Thrilled to bits!*
When I reached home, I sawareceipt from Pos Laju saying that there wasapackage for me. After dinner, I drove to Victoria Street to pick it up. On the way there, I wondered who it could be that sent me the parcel and believe me, I had some bizarre thoughts that filled me with fear and dread!
With much excitement, I collected the package and it wasabeautiful necklace and matching bracelet from my girlfriend Carol who runs popshop showroom and blogs at Pop Up Accessories. Swing by her site and you will be bedazzled by the beautiful range of accessories and clothes that she markets.
Well, it has really beenagloriously happy day for me. I still have to go down to town to pick upabottle of virgin coconut oil from another former varsity mate who was in Penang when I was in KL. As for now, I have to calm down and recover from the unexpected bonanza from relatives and friends!! I just want to express my grateful tanks for their kindness and generosity!
Take care and haveawonderful evening andagood rest!
Source:နှစ်၂၀၀ ကျော် သမိုင်းဝင် လင်းဇင်းကုန်း မြန်မာမွတ်စလင် သုဿာန် ဖျက်သိမ်းရန် အမိန်ထုတ်ထား MMSY News ဓါတ်ပုံနှင့် အင်တာဗျူး- သုတမောင်
မန္တလေးမြို့၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ အိုးတော်ရပ်ကွက်တွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၀၀)ကျော်မှစ၍တည်ရှိခဲ့သော လင်းဇင်းကုန်း မွတ်စလင် သုဿန် ဥယျာဉ်တော်အား ဖျက်သိမ်းတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၂-ခု ဇွန်လ ၁-ရက်ကနေ ၃-ရက်အထိ သတင်းစာထဲတွင်ပါရှိခဲ့တဲ့ လင်းဇင်းကုန်းသုဿာန်အား (၁-၇-၂၀၁၂)ရက်တွင် အပြီးပိတ်သိမ်းမည့် ကြေငြာချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လင်းဇင်းကုန်းသုဿာန်သို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့မှုအပေါ် ပြန်လည်ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာ [အတွဲ(၁၅)၊ အမှတ်(၁၈၂)၊ ၁-၆-၂၀၁၂၊ ၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၂ ရက်၊ သောကြာနေ့]သတင်းစာမှ ကြေညာချက်
မေး - လင်းဇင်းကုန်း ကဘာရ်စတာန်(သုဿာန်)ရော ဒါရ်ဂါဟ်နဲ့ရော ပတ်သက်ပြီးတော့ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ်။ ဦးလေးတို့အနေနဲ့ ပြောပြလုိ့ရမလား ခင်ဗျ။
ဖြေ – ကျွန်တော်တို့က ဒါရ်ဂါဟ်ကိုတာဝန်ယူပါတယ်။ လူငယ်တွေကတော့ သုဿာန်အတွက် တာဝန်ယူထားကြတယ်။
မေး – ဟိုတစ်လောက သုဿာန်ကိုဖျက်သိမ်းတော့မယ်လို့သိရတယ်။ သတင်းစာထဲမှာတော့ ပိတ်သိမ်းမယ်လို့ကြေငြာတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖျက်သိမ်းမယ်လို့လည်းသတင်းကြားတယ်။ အဲဒါ အခု ဘယ်လိုအခြေအနေရှိပါသလဲ။
ဖြေ – အဲဒါကိုတော့ ဒီနေရာဟာ သမိုင်းဝင်နေရာဖြစ်တာကြောင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဆီထိရောက်အောင် စာပို့ထားပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အစ္စလာမ့်အဖွဲ့ကြီး (၅)ဖွဲ့ကလည်း ၀ိုင်းထောက်ခံပြီးတော့ စာတင်ထားပါတယ်။ ဒီတော့ ပိတ်သိမ်းဖျက်သိမ်းမယ့်ကိစ္စကို ဘာမှဆက်မပြောပဲ လောလောဆယ် ဒီအတိုင်းပဲ ခဏထားထားပါတယ်။
မေး – ဒီသင်္ချိုင်းမြေအကြောင်း နည်းနည်းလောက် ပြောပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာ။
ဖြေ – ဒီဘက်မှာ အခုမြင်နေရတဲ့အ၀န်းအ၀ိုင်းကတော့ အာဗစ်ရှားဟိုစိုင်နီသခင့်ကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့လူတွေက ၀ိုင်းပြီး ဒဖွနာ(မြှုပ်နှံ)လိုက်လို့ ကဘာရ်စတာန်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်။ မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ သင်္ချိုင်းပေါ့။ အမှန်က မွတ်စလင်မ်သင်္ချိုင်းက ဟိုးကမြင်နေရတဲ့ အုတ်တံတိုင်းဘေးလမ်းရဲ့ ဟိုဘက်မှာ။ အရင်တုန်းကတော့ အဲဒီမှာ ဇရပ်တွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ အဲဒီဘက်ခြမ်းက မွတ်စလင်မ်သင်္ချိုင်းကို ခရစ်ယာန်ဘက်ကိုသွင်းလိုက်တယ်။ ဒီဘက်က စကားဝါဥယျာဉ်ကို သင်္ချိုင်းလို့သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာပါ။ စကားဝါဥယျာဉ်ကိုတောင် မွတ်စလင်မ်သင်္ချိုင်းလို့ အပြည့်အ၀ မသတ်မှတ်ပေးဘူး။ အမရပူရ အ.ထ.က(၁) တည်ထောင်တဲ့ ဆရာကြီး ဦးE-ကိုကိုကြီးရဲ့ဇနီး အုတ်ဂူဒေါ်ဒေါ်ရန်အုတ်ဂူရဲ့ ဒီဘက်ကိုပဲပေးတယ်။ ဟိုဘက်ကကျန်တာကို ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးလုပ်လိုက်တယ်။
မေး – ဟုတ်ကဲ့။ မွတ်စလင်မ်သင်္ချိုင်းအနေနဲ့က ဟိုးက မြင်နေရတဲ့ အုတ်တံတိုင်းထိရှိတာလား။
ဖြေ – ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီအုတ်တံတိုင်းလုပ်ရင်းနဲ့ တားလို့ ကျွန်တော်တို့ အုတ်တံတိုင်းက အပြီးထိ မရောက်လိုက်ဘူး။ အုတ်တံတိုင်းက အကုန်လုံးပြီးပြီးပြီ။ နည်းနည်းလေးပဲကျန်တော့တာ။ အမှန်ကတော့ တားလိုက်လို့ ဆက်လုပ်လို့မရတော့တာ။
မေး – ဒါဆို မွတ်စလင်မ်သင်္ချိုင်းက အဲဒီအုတ်တံတိုင်းအထိတော့ရှိတယ်ပေါ့။ အုတ်တံတိုင်းရဲ့ ဟိုဘက်က ခရစ်ယာန်သင်္ချိုင်းလား။
ဖြေ – အုတ်တံတိုင်းရဲ့ဟိုဘက်မှာ လမ်းရှိသေးတယ်။ လမ်းရဲ့ဟိုဘက်က ခရစ်ယာန်သင်္ချိုင်းပါ။ ခရစ်ယာန်ရော၊ တရုတ်ရော၊ လူမျိုးစုံရှိတယ်။ အမှန်ကတော့ မွတ်စလင်မ်သင်္ချိုင်းမြေကို ခရစ်ယာန်ကို ပေးလိုက်ပြီး ဒီဘက်က စကားဝါဥယျာဉ်ကို မွတ်စလင်မ်သင်္ချိုင်းအဖြစ်ပေးလိုက်တာ။
မွတ်စလင်မ်အများစုကလည်း ဒီစကားဝါဥယျာဉ်မှာ မြှုတ်နေတော့ ဒီဘက်က ဒါရ်ဂါဟ်လို့ကို မသတ်မှတ်တော့ဘဲ သုဿာန်လိုဖြစ်နေပြီး သူတို့က သုဿာန်လို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတာ။ စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာပါ။ ဒါက ဘယ်လိုမှလည်း ပြောခွင့်မှ မရှိခဲ့တာ။
မေး – ဟုတ်ကဲ့ ဒါဆို စကားဝါဥယျာဉ်ဆိုတာ အဲဒီနာမည်နဲ့ ဟိုးအရင်ကတည်းကရှိခဲ့တာလား။ ဘယ်လိုသတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်လာတာလဲ။
ဖြေ – အဲဒါက ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်ကတည်းက အာဗစ်ရှာဟိုစိုင်နီသခင်ကြီးက ဒီစကားဝါဥယျာဉ်ထဲမှာလာပြီးတော့ အမလ်ထိုင်(တရားထိုင်)နေတော့ ပုဏ္ဏားဝန်ကနေ စကားဝါဥယျာဉ်ကိုဝယ်ပြီး သခင့်ကိုလှူလိုက်တယ်။ အာဗစ်ရှာဟိုစိုင်နီသခင်က မိန့်တော်မူတယ် "ငါကွယ်လွန်ရင် ဒီစကားဝါပင်အောက်မှာ မြှုပ်နှံပေးပါ"ဆိုပြီးတော့။ ဒါကြောင့် သခင့်တပည့်ဖြစ်တဲ့ ပုဏ္ဏားဝန်မင်းကြီး ဒီစကားဝါမြေကိုဝယ်ပြီး သခင့်ကို ၀ကားဖ်(လှူဒါန်း)လုပ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစ္စလာမ်မှာ အခုလို သူတော်စင်များရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အ၀န်းအ၀ိုင်းမှာ ၂၄-နာရီပတ်လုံး ကရုဏာတော် မပြတ်မစဲ ရွာသွန်းတယ်လို့ရှိတယ်လေ။ အဲဒီအကျိုးထူးရလိုတာကြောင့် သခင့်အနားတစ်ဝိုက်မှာ မြှုပ်နှံကြရင်း မွတ်စလင်မ်သင်္ချိုင်းဆိုပြီး ဖြစ်သွားတယ်။
မေး – ဒါဆို ဒီသင်္ချိုင်းမြေရော၊ ဒါရ်ဂါဟ်မြေနေရာအပါအ၀င်ဆို စုစုပေါင်း ဧကဘယ်လောက်ကျယ်ဝန်းပါသလဲ။
ဖြေ – ဒီဘက်က ဒါရ်ဂါဟ်ပိုင်ယာမြေ ၃-ဧကကျော်ကျော်၊ သင်္ချိုင်းမြေနေရာက ၃-ဧက ဆိုတော့ အားလုံး ၆-ဧကကျော်ရှိပါတယ်။
အာဗစ်ရှားဟ်ဟိုစိုင်နီသခင်နှင့် ပုဏ္ဏားဝန်မင်းတို့၏ သင်္ချိုင်းဂူ
ကမ္ဘာကျော်ဦးပိန်တံတားကို တည်ဆောက်ခဲ့သူ ဦးပိန်ရဲ့ သချိုင်းဂူ
မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော သွေးသောက်ကြီးဦးရန်အောင်၏
မြန်မာ့ရိုးရာလက်ရာဖြင့်တွေ့ရသည်၊ ရှေးခေတ် မြန်မာ့အုတ်ခဲများကိုလည်း
ဟိုစိုင်နီ ဘိုးတော်ဧဗလီ (စကားဝါဥယျာဉ် ပရ၀ုဏ်အတွင်းတွင် တည်ရှိသည်။)
ဘိုးတော်ဦးဝိုင်း (ဗဒုံမင်း) လက်ထက် အစ္စလာမ်သာသနာပိုင် ဟိုစိုင်နီသခင် ၏ အုတ်ဂူ ကျောက်စာ
မေး – ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒီတော့ ဒီလင်းဇင်းကုန်းသင်္ချိုင်းဆိုတာက သမိုင်းဝင်နေရာလို့သိထားပါတယ်။
ဖြေ။ ဟုတ်ပါတယ်။ အာဗစ်ရှာဟိုစိုင်နီသခင်ကြီးဆိုလည်း သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ ဘိုးတော်မင်းတရားကြီးကိုယ်တိုင် သူ့လက်ထက်မှာ အစ္စလာမ်သာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သာသနာပိုင်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသူတစ်ဦးပါ။ နောက် ဆရာကြီးဦးနု၊ ဆရာကြီးဦးနုဆိုတာကလည်း သမိုင်းဝင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါ။ အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာနဲ့ပတ်သက်တာတွေကို မြန်မာစာပေနဲ့ပြန်ဆိုရေးသားခဲ့ပြီး၊ အစ္စလာမ်သာသနာနဲ့ပတ်သက်တာတွေကို ဘုရင့်ထံ သံတော်ဦးတင်တဲ့ သံတော်ဦးတင်လွှာကျမ်းကိုရေးသားခဲ့ပြီး ဘိုးတော်မင်းတရားကြီးကပေးအပ်တဲ့တာဝန်တွေကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့လို့ ရမ္မာဝတီမြို့ဝန်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်တယ်။
မေး – နောက် တစ်ခြား သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူတွေများ ရှိပါသေးသလဲ။
ဖြေ – အာဗစ်ရှာဟိုစိုင်နီသခင်ကြီးရှိတယ်၊ ဆရာကြီးဦးနုရှိတယ်၊ နောက် ဦးပိန်တံတားကြီးကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဦးပိန်ရှိတယ်။ မြို့ဝန်ဦးဘိုင်ဆပ်ရှိတယ်။ နောက် ဟိုဘက်မှာ သွေးသောက်ကြီးဦးရန်အောင်ရှိတယ်။ နောက် ပုဏ္ဏားဝန်ရှိတယ်။
မေး – ဟုတ်ကဲ့ ပုဏ္ဏားဝန်က အာဗစ်ရှာဟိုင်နီသခင်ကြီးရဲ့ ဘေးကပ်လျက်က ပေါ့နော်။ နောက်ထပ် ဘယ်သူတွေများ မြှုပ်နှံထားတာရှိပါသေးလဲ။
ဖြေ – အထောက်အထားအနေနဲ့က ဒီလောက်တော့ရှိတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုရင် ဦးE-ကိုကိုကြီးတို့ရှိတယ်။
မေး – ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဦးE-ကိုကိုကြီး က ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါလဲ ပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာ။
ဖြေ – ဦးE-ကိုကိုကြီးဆိုတာ အမရပူရက အ.ထ.က ကျောင်းကြီးကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူပါ။ ကျောင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ စပြီး ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံပြီး ကြိုးပမ်းခဲ့သူပါ။
မေး – ဟုတ်ကဲ့ အမရပူရ အ.ထ.က ဆိုတာ ဘယ်ကျောင်းကိုပြောတာပါလဲ။ ဒီနားလေးက အ.ထ.က ကိုပြောတာပါလား။ အဲဒီကျောင်းကို ဦးE-ကိုကိုကြီးက စပြီးတည်ထောင်ခဲ့တာပေါ့နော်။
ဖြေ – ဟုတ်ပါတယ်။ အမရပူရ အ.ထ.က(၁)ပါ။ အခုဆို ကျောင်းရဲ့ ရွှေရတုသဘင်အခမ်းအနားမှာ ကျောက်စာလည်းရေးထိုးထားပါတယ်။ ဟိုတုန်းမှာ မန္တလေးမှာ အစ္စလာမ်မီယာနေရှင်နယ်ဆိုပြီး ဆရာကြီးဦးထွန်းတို့က တည်ထောင်လိုက်သေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမှာလည်း ဆရာကြီး ဦးE-ကိုကိုကြီးက ဒီကျောင်းကို စတည်ထောင်ခါစတုန်းက နေရှင်နယ်အမျိုးသားကျောင်းဆိုပြီးခေါ်တွင်လိုက်သေးတယ်။ နောက် နေရှင်နယ်တွေမဟုတ်တော့ဘူး အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းဆိုပြီးပြောင်းတယ်ဆိုတော့ အစိုးရအထက်တန်းကျောင်း-အမရပူရဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်။ အခုတော့ အ.ထ.က(၁) အမရပူရ ဖြစ်သွားပါပြီ။ မြစ်ငယ်က အ.ထ.က(၂)ဖြစ်သွားတာပေါ့။
မေး – ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒါဆို ခုနက အကြောင်းအရာကို ပြန်မေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ ဒီသင်္ချိုင်းမြေပိတ်သိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုဆို ဦးလေးတို့က နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဆီ စာတင်ထားတယ်ပေါ့နော်။
ဖြေ – သမ္မတကြီးဆီတော့ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သေးပါဘူး။ ၀န်ကြီးချုပ်တို့၊ ဌာနဆိုင်ရာ အဆင့်ဆင့်တို့ကို ပို့တာတွေကို မိတ္တူအနေနဲ့ ပို့တာပါ။ သမ္မတဆီစာတင်ဖို့ရာက ဒီသမိုင်းဝင်နေရာ ဖျက်သိမ်းမှာကို ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ မေတ္တာရပ်တဲ့အနေနဲ့ လူ ၃၀၀၀ နီးပါးလောက် လက်မှတ်ထိုးထားတယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့်မှ သမ္မတကြီးဆီ တင်ရမှာပါ။
မေး – ဒါဆို အခုက သမ္မတဆီထိ မရောက်သေးဘူး။ ၀န်ကြီးအထိ ပို့ထားပြီဆိုတော့ ၀န်ကြီးဆိုတာ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနလား။
ဖြေ – သာသနာရေးဝန်ကြီးရော၊ မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆီပါ ပို့ထားပါတယ်။
မေး – ဟုတ်ကဲ့ အခုလို စာပို့တဲ့အခါမှာ သူတို့ဘက်က ဘယ်လိုအကြောင်းပြန်စာပေးပါသလဲ။ ဘာမှမပြောပဲ ဒီအတိုင်းပဲ အသာရပ်ထားတာလား။
ဖြေ – အခုကတော့ ဒီအတိုင်းလေးပဲ ဖျက်လည်းမဖျက်ပါဘူး။ ဘာမှလည်းမလုပ်ပါဘူး။ အေးအေးဆေးဆေးလေးပဲ နေကြပါတဲ့ အဲဒီလောက်တော့ဖြေထားတယ်။ အစ္စလာမ့်အဖွဲ့ကြီး ၅-ဖွဲ့ကလည်း ဒီနေရာကိုမဖျက်ဖို့၊ လက်ရှိအခြေအနေအရ
ဖျက်လည်းမဖျက်သင့်ကြောင်း၊ နောက် အစ္စလာမ်သာသနာဟာ သင်္ချိုင်းမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျက်လို့မရတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်၊ သမိုင်းဝင်နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ၀ိုင်းပြီး မေတ္တာရပ်ခံကြတယ်လေ။
မေး – ဟုတ်ကဲ့ ဦးလေးတို့ပြောသလို အေးအေးဆေးဆေးပဲနေပါ မဖျက်ပါဘူးဆိုတာက တရားဝင် စာနဲ့ အကြောင်းပြန်တာလား။ ဒါမှမဟုတ် နှုတ်နဲ့ပဲ ပြောတာလား။
ဖြေ – နှုတ်နဲ့ပဲပြောတာပါ။
မေး – အဲဒီတော့ ဘယ်က ပြန်ပြောတာလဲ။ သာသနာဝန်ကြီးဌာနကလား၊ မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးဆီကလား။
ဖြေ – သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီး သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကပါ။ သာသနာရေးဝန်ကြီးက ဦးသန်းစိုးမြင့်၊ မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ ဦးရဲမြင့်ပါ။
မေး – ဟုတ်ကဲ့ပါ။ သိရသလောက် ဒီ ဒါရ်ဂါဟ်က ၁၉၉၇-အဓိကရုဏ်းဖြစ်စဉ်က မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းခံရတယ်လို့သိရတယ်။ အခုပြန်လည်ပြင်ဆင်လာတာ ဒီလောက်အခြေအနေပြန်ရောက်လာတယ်။ အခုလက်ရှိအခြေအနေကနေ ဆက်ပြီးဘာလို့ မပြင်ဖြစ်တာလဲ။ ပြင်ခွင့်မရလို့လား။
ဖြေ – ဟုတ်ပါတယ်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခွင့်က တားမြစ်ခံထားရပါတယ်။ ၉၇-ခု ဖျက်ဆီးခံရပြီးခါစက ပြင်ဆင်လိုက်သေးတယ်။ အဲဒီတုန်းကပြင်လိုက်တာ အခုမြင်နေရတဲ့ အခြေအနေပါ။ အဲဒီနောက် ဆက်ပြီးပြင်ဆင်ခွင့်မရပါဘူး။ တားဆီးခံထားရပါတယ်။ အရင် တိုင်းမှူးလက်ထက်ကပါ။ ပြင်ဆင်ခွင့်ရဖို့ တိုင်းမှူးနဲ့တွေ့ဖို့လည်း ကြိုးစားပါတယ်။ တိုင်းမှူးကအတွေ့မခံတာကြောင့် ဒီအတိုင်းလက်စနဲ့ ရပ်ထားရတာပါ။ ပြင်ဆင်ဖို့ခွင့်ပြုတုန်းက တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်က စာနဲ့ပေနဲ့ ခွင့်ပြုတယ်။ တားဆီးတဲ့အခါကျ တရားဝင်စာနဲ့မဟုတ်ပဲ နှုတ်မိန့်နဲ့သာ တားဆီးခဲ့တာပါ။ ဘာမှ မလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီး။ အခု ဒီလက်ထက်ရောက်တော့လည်း စည်ပင်သာယာက ဘာမှ မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတာပဲ ပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီကို အထောက်အထားနဲ့စာနဲ့ပေနဲ့တစ်ခုမှ မတားဘူး။
မေး – ဒါဆို တရားဝင်တားမြစ်ပိတ်ပင်တာမျိုးမရှိဘူးပေါ့။
ဖြေ – ဟုတ်ကဲ့ တရားဝင်အထောက်အထားနဲ့ တားမြစ်တာမျိုးမရှိပါဘူး။ နှုတ်မိန့်နဲ့သာ တားမြစ်တာပါ။ အဲဒါကို ရပ်မထားရင်လည်း အဆိုးပဲဖြစ်မယ်လေ။ ဒါပေမယ့် အတတ်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင်လို့တော့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ အခုက ဒီဘက်ခေတ်မှာ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အလမ်းလည်း နည်းနည်းပွင့်လန်းလာပြီဆိုတော့ အခြေအနေတော့ နည်းနည်းကောင်းလာပါပြီ။
မေး – ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒါဆို ဒီမှာက လုံးဝသဂြိုဟ်လို့ မရတော့ဘူးလား။ ဘယ်မှာ သွားပြီး မြှုပ်နှံရသလဲ။
ဖြေ – အမရပူရကလူတွေက ဒီကနေဆိုရင် မြို့နယ်(၄)ခုကိုဖြတ်ပြီး ကြာနီကန်သုဿာန်ထိ သွားရောက်သဂြိုဟ်ရပါတယ်။ အရင်ကလိုဆိုရင်တော့ မြို့နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အလောင်းတောင်သယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ အခုတော့ မြို့နယ်(၄)မြို့နယ်ကိုဖြတ်၊ ရံဖန်ရံခါ VIP လာတဲ့အခါဆို မြို့နယ် (၅)ခုကိုဖြတ်ပြီး ကြာနီကန်သုဿာန်အထိ သွားရပါတယ်။
မေး – ဒါဆို အမရပူရက မန္တလေးမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ထိပ်မှာဆိုတော့ မန္တလေးမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်ထိပ်ထိ သွားရောက်ရတာပေါ့။
ဖြေ – ဟုတ်ပါတယ်။ လိုက်ပို့တဲ့သူတွေအတွက် ငှားရတဲ့ ကားခကိုက ကားတစ်စီးကို လေးသောင်းခွဲ ငါးသောင်းပေးရပါတယ်။
မေး – ဟုတ်ကဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါရစေ။ ဒီ အမရပူရ လင်းဇင်းကုန်းသင်္ချိုင်းတစ်ဝိုက်မှာလည်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေ အများကြီးရှိတယ်လေ။ အဲဒီကဘုန်းတော်ကြီးတွေနဲ့ရော ဘယ်လိုဆက်သွယ်မှုမျိုးရှိပါသလဲ။
ဖြေ – ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာက ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေက ပတ်ပတ်လည်ပါပဲ။ ဒီမဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်ကြီးကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဆရာတော် ဦးဇန္နကသာရာဘိဝံသ ဆိုရင်လည်း ရာပြည့်ခလီဖွှဟ် ဦးမောင်မောင်ကြီး ရှိစဉ်ကတည်းက အလွန်ကို ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ကြသူတွေပါ။ နောက် အခုဆို တောင်လေးလုံးတိုက်က ဆရာတော်ဦးပညာဇောတ(ကိုပညာ-အမရပူရ)ဆိုရင်လည်း ဦးပညာရေးတဲ့စာအုပ်မှာ ဒီဒါရ်ဂါဟ်အကြောင်းကို ထည့်ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအနားဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းက ဘုန်းတော်ကြီးတွေက နားလည်ကြပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးတွေနဲ့လည်း ခင်မင်ရင်းနှီးကြတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ခင်မင်နေတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေကို ဆွမ်းချိုင့်ပို့ပေးတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ဒီအမရပူမှာနေထိုင်ကြသူတွေက ဘာသာတရားအချင်းချင်း အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိကြပါတယ်။
၁၉၉၇-ခု အဓိကရုဏ်းတွင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရင်း တားဆီးခံရသည့်အတွက် တစ်ပိုင်းတစ်စဖြင့် ရပ်တန့်ထားခဲ့သော အာဗစ်ရှာဟိုစိုင်နီသခင်၏ ဒါရ်ဂါဟ်တော်
အာဗစ်ရှာဟိုစိုင်နီသခင် သည် ဘိုးတော်ဦးဝိုင်း (ဗဒုံမင်း) လက်ထက် အစ္စလာမ်သာသနာပိုင် အဖြစ်ချီးမြှောက်ခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
မေး – ဟုတ်ကဲ့ ဒါဆို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ တစ်ခုမေးပါရစေ။ ခုနက ဦးလေးပြောတယ် ဒီအမရပူရမှာ ဘာသာအချင်းချင်း အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ ၁၉၉၇-ခု အဓိကရုဏ်းမှာ ဒီဒါရ်ဂါဟ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံရတယ်။ အဲဒါကျတော့ဦးလေး ဘယ်လိုများပြောချင်ပါသလဲ။
ဖြေ – ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းခံရတာကလည်း။ ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီအနီးအနားတစ်ဝိုက်က သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနားတစ်ဝိုက် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းက ၀ါကြီးတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးက ကိုယ့်ကျောင်းက ရဟန်းသံဃာ၊ ဦးဇင်းတွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအနီးအနားတစ်ဝိုက်က မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပြောလို့ရပါတယ်။
မေး – ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အခုလိုပြောပြပေးတာတွေအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လက ကြားသိရတဲ့သတင်းအရ လင်းဇင်းကုန်းသုဿာန်ပိတ်သိမ်းဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုတော့ ဖျက်သိမ်းခဲ့ရင်တောင် မှတ်တမ်းအထောက်အထားသမိုင်းကျန်ရှိစေဖို့ရယ်၊ လူငယ်အများစုကဒီသမိုင်းကြောင်းကို မသိကြတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် လူငယ်တွေလည်း အသိရစေဖို့ မေးမြန်းရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဖြေ – ဦးလေးတို့ကလည်း ၀မ်းသာပါတယ်။ ဒါက အာဗစ်ရှားဟ်ဟိုစိုင်နီသခင်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်လေးပါ။ ဒါရ်ဂါဟ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း သိနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာ့အနုပညာ ကြာကလပ်ပုံစံပြုလုပ်ထားသော ဆရာကြီးဦးနု သင်္ချိုင်းမြေ
ခေါင်းရင်း အထိမ်းအမှတ်တိုင် (ခေါင်းရင်းခြေရင်း တိုင်နှစ်ခုရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ခေါင်းရင်းတိုင်တစ်ခုသာ ရှိတော့ကြောင်းသိရသည်။)
မြန်မာ့အနုပညာလက်ရာ ကြာကလပ်ဖြင့်တွေ့ရသော ခေါင်းရင်းအထိမ်းအမှတ်တိုင်
ကိုပညာ(အမရပူရ)အမည်ခံ တောင်လေးလုံးကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ဦးပညာဇောတ၏ "တောင်သမန်ဝန်းကျင် သမိုင်းဝင်နေရာများ" (နောက်ဆက်တွဲ) ပထမအကြိမ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖေဖော်ဝါရီ-၁၉၉၆ (စာမျက်နှာ-၇၄-၇၅)တွင်ဖော်ပြချက်
ဒါရ်ဂါဟ်တော်သည် သခင်ကြီး အာဗျစ်ရှာဟိုစိုင်နီဒ ဂူဗိမာန်ဖြစ်သည်။ မယ်ဇယ်တန်းမြောက်ဘက် ဘုရားနီဘုရားအနောက်ဘက် အိုးတော်ရပ်ကွက် မှိုက်စုရပ်၏ အရှေ့စွန်း လင်းဇင်းကုန်းသုဿာန်မြေတွင် တည်ရှိသည်။
အာဗျစ်ရှာဟိုစိုင်နီသည် သက္ကရာဇ် ၁၁၃၇-ခုနှစ်တွင် ဖွားမြင်သည်။
အမရပူရနေပြည်တော်သို့ (၁၉)နှစ်သားအရွယ် (၁၁၅၆-ခု)ရောက်ရှိသည်။
အသက်(၃၉)နှစ် သက္ကရာဇ် ၁၁၇၆-ခုတွင် ဘ၀တစ်ပါးပြောင်းကြွသည်။
အမရပူရဘိုးတော်မင်းတရားလက်ထက် နှစ်ပေါင်း(၂၀)တိတိ အစ္စလာမ်သာသနာပိုင်အဖြစ် ခန့်အပ်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
နှစ်ပေါင်း (၂၀)အတွင်း အစ္စလာမ်ကျမ်းပေါင်း (၃၀)ရေးသားပြုစုခဲ့သည်။ မိုရီးဒ်တပည့်မတစ်ဦးဒ (မိုင်ယစ်တ်) အသုဘအခမ်းအနားတွင် လိုက်ပါပို့ဆောင်ရာ ယခုဒါရ်ဂါဟ် တည်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဥယျာဉ်များစိုက်ပျိုးထားသည်ကို တွေ့ရှိလေသည်။ တစ်ခုသော စကားဝါဥယျာဉ်ထဲတွင် သခင်နေထိုင်နေတော်မူရာ၊ အေးဆေးငြိမ်းချမ်းလှသဖြင့် 'ငါကွယ်လွန်လျှင် ဤနေရာတွင် (ဒဖွနာ)သဂြိုဟ်ခြင်းပြုရမည်'ဟု (၀စွီယတ်)မှာထားခြင် ပြုတော်မူ၏။
ပုဏ္ဏားဝန်မင်းက ထိုဥယျာဉ်မြေကို ၀ယ်ယူ၍ သခင့်နာမည်ဖြင့်လှူ၏။ ကွယ်လွန်သောအခါ ထိုနေရာ၌ မြှုပ်နှံသည်။ ဒါရ်ဂါဟ်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ'ကွန်းခိုရာ'ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
အထက်ပါ ဖော်ပြချက်ကို ယင်းသမိုင်းစာအုပ် စာမျက်နှာ (၁၄၈)တွင် သမိုင်းပါမောက္ခ ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုချက်
"THE DARAGA DAW"
Arbhisha Hussaini's tomb is commonly called the Daraga Daw. (Durgah is Persian meaningaroyal court; with an extended meaning in India it is used to meanashrine ofaMohammedian saint for prayer.) It is located on the north of Mezabin (Madhuca longifolia) avenue, west of "Red Pagoda" (Shwe Mutthaw Thein Hpaya), east of the wards called O-daw (Royal Potters) and Hmite Su (People engaed in reclaiming gold dust from the refuses collected from pagoda precincts and goldsmith's workshop) and in the Lin Zin Gon cemetery.
Arbhisha Hussaini was born 1776 and came at the age of nineteen to Amarapura in 1795. He died at the age of only thirty nine in 1815 after serving the king as the leader of the Islamic people for twenty years.
He had written thirty books on Mohaedanism. Atafuneral ofafemale devotee or Moree he came to sit underaZagawa (Michelia champaca) tree and as he was so pleased with that place in the garden he said:
"I wishawould be buried here". Surely his wish was fulfilled andaDurgah was built in his memory at his tomb under the Zagawa tree that he had chosen.
The Ponna Wun (Officer – in – Charge of Brahmins) bought the gardenand gave it to him before he died.
ဒါရ်ဂါဟ်တော် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ထုတ်ဝေသည့် "ဘိုးတော်ဦးဝိုင်း(ဗဒုံမင်း)လက်ထက် အစ္စလာမ်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ဘုရားဘွဲ့ရ ဟသွရတ်-စိုက်ယစ်ဒ်-ခါဂျာ-ဟာဖွစ်ဇ်-မို့ဟမ္မဒ် ရှရီးဖ် အာဗစ်ဒ်ရှာဟ် ဟို့စိုင်နီ အတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်း" စာအုပ် (စာမျက်နှာ ၃၄-၃၅-၃၆) မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
The rains are back in these part of the world and it'sabitter sweet feeling. Sweet cos it's been freaking hot the past couple of months and the rains the past week has been god-sent! It's going to be bitter cos it's going to play havoc with my running schedule.
I tend to run in the evenings after work and the rains are mostly in the evenings these days. Oh well, I suppose I could always run in the rain as long as there isn't any lightning and thunder. That's one thing I'm freaking afraid of. You don't mess around with lightning.
I suppose maybe I should take outaliability insurance, just in case :P
Posted: 18 Jul 2012 08:01 AM PDT
"Walaubagaimanapun selepas bersara saya mengambil keputusan untuk menyertai PAS kerana perjuangan PAS 'Islamik' dan lebih kepada 'semangat' dan bukan hanya 'fizikal' semata-mata.
"Saya mempunyai kepakaran di dalam sistem perhutanan, air dan alam sekitar dan saya percaya saya boleh menyumbang sesuatu kepada PAS dalam konteks tersebut", kata Zainal.
"Rakyat tidak perlu takut dan rasa terhutang budi kepada Umno.Apa yang Umno beri pada rakyat sememangnya merupakan hak rakyat dari duit rakyat sendiri (cukai).
"Tanamkan keyakinan tinggi kepada pemerintahan PAS dan Pakatan Rakyat kerana ia sudah terbukti di negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat seperti di Selangor, Pulau Pinang dan Kelantan.
"PAS akan berjuang habis-habisan dengan gandingan PKR dan DAP untuk mengecapi kemenangan mutlak di Negeri Sembilan pada Pilihan Raya Umum ke-13 nanti", kata Norazman.
Posted: 18 Jul 2012 04:30 AM PDT
Petaling Jaya – Sepasang kekasih yang asyik dengan tanpa segan silu berasmara dalam kenderaan di hadapan rumahnya di Jalan SS 5a/15, Kelana Jaya dicekup oleh anggota Kawasan Rukun Tetangga (KRT) SS 5a dalam keadaan berbogel. Gambar hiasan.
"Bila kami ketuk cermin, kedua-duanya bingkas bangun dan hanya sempat menutup anggota sulit masing-masing dengan pakaian dan tangan," katanya
"Mereka merayu meminta supaya tidak dikenakan tindakan tegas dan penduduk menasihati pasangan itu supaya tidak mengulangi perbuatan terbabit.
"Rekod dan butiran diri mereka diambil sebelum dibenarkan pulang," katanya. -SH
Semakin menjadi-jadi. Dalam kereta pun boleh.
Ramadhan menjelang tiba dua-tiga hari lagi. Pun masih tak sedar untuk buat kerja-kerja sebegini.
Posted: 18 Jul 2012 02:45 AM PDT
Source: Irrawaddy-Siamese King's Tomb to be Destroyed
"Thai people visiting Burma come to this tomb regularly to pay respect to their king,"alocal resident told The Irrawaddy. "I have heard that this graveyard will soon be cleared for some sort of urban project."
According to Burmese history records, King Hsinbyushin (1736-1776), the third king of Burma's Konbaung Dynasty, invaded the ancient Thai capital Ayutthaya in 1767 and brought as many subjects as he could back to his capital Ava, including Uthumphon.
"The records say the Thai king was in monkhood when he was brought back asaprisoner of war and when he died in captivity his body was buried at Linzin Hill," Dr. Tin Maung Kyi,awell-known Burmese historian and Mandalay resident, told The Irrawaddy.
The authoritative History of Ayutthaya website says Uthumphon, who is better known as King Dok Madua or "figflower" is Siamese history, was the youngest son of King Borommakot (1733-1758) andaminor queen called Phiphit Montri, and was appointed as Uparat (Crown Prince) by his father. Uthumphon also means "figflower" but in Sanskrit.
Scholars in Mandalay have raised concerns that the new project will not only mean the loss of considerable heritage but also affect the country's nascent yet potentially huge tourism industry.
"Thai people regularly come to their ex-king's tomb to pay respect. I always have to clean the tomb before their arrival. They will also feel hurt if the tomb is destroyed," said Nyein Win, an archaeologist in Amarapura.
Posted: 18 Jul 2012 02:05 AM PDT
Source:ASEAN Community's FB
Korean fashion brand Bean Pole [Kr] is collaborating with High Cut Magazine foraLondon Olympics themed pictorial, featuring pop group Girls' Generation. The formal costume looks sleek, whereas the other clothing are more of British Heritage styled (which Bean Pole is famous for) instead of anything sporty.
Korean Olympic Girls' (Generation) from YeinJee's Asian Journal
Posted: 18 Jul 2012 02:38 AM PDT
Allah tetap benar dengan perkataanNya sekalipun pencacai UMNO tidak menyukainya.
Posted: 18 Jul 2012 12:15 AM PDT
Posted: 17 Jul 2012 08:23 PM PDT
Johor Premium Outlets – I believe many of you have heard before the Johor Premium Oulets at Kulai, Johor which sells designer's brand product atadiscount rate everyday. I've finally visited the place few weeks ago and bought stuff too!
Well, it's located at Kulai, Johor, very near to Singapore's Second Link and Senai Airport, about 40 minutes from Johor Bahru City Centre. It's pretty sub-urban, there's nothing around the JPO. Surprisingly, I saw many cars and tour bus at there.
I was pretty excited when I see the brands at there. Brother told me that the Johor Premium Outlets is exactly the same with the one in the USA. Cool right? However, he said that the retail outlet size here is smaller. Nevertheless, it's stillacool place to explore and shop.
Looking at the products, I've got to say most of them are old stock. The price, some (not all) are at great discount. I've boughtaRalph Lauren Polo there, the price wasalot cheaper than the standard retail in shopping malls. It's pretty hard to tell you whether the stuffs there are good buy or not, you have to visit it on your own. It'saworth visit, something different from shopping at the mall. =)
GPS: 1º 36'31" N 103º 37'59" E
More direction information here.
Posted: 17 Jul 2012 10:33 PM PDT
Himpunan Hijau Menuju Putrajaya: "BN sakit"
Berucap di hadapan puluhan ribu rakyat semasa Himpunan Hijau Menuju Putrajaya di Stadium Kuala Selangor malam tadi, beliau yang juga Ahli Parlimen Seputeh berkata, pembohongan dan fitnah yang melaga-lagakan kaum secara berterusan ke atas pimpinan Pakatan Rakyat mencerminkan betapa BN sedang 'sakit'.
"Saya dimasukkan ke dalam ISA dulu, kemudian baru polis siasat. Kemudian hasil siasatan menunjukkan bahawa saya tidak pernah pun pergi ke masjid tersebut dan tidak pernah bangkitka isu azan dan (Timbalan Pengarang Utusan Malaysia) Zaini Hassan memutarbelitkan cerita ini di Utusan," katanya.
"Ini semua tidak benar sama sekali. Kita telah jelaskan sejak dahulu lagi bahawa orang Melayu merupakan majoriti di negeri ini dan kita akan terus menyokong kepimpinan yang berintegriti dan bersih," tambah beliau.
"Lawan gergasi yang lama berkuasa"
Turut memberi ucapan pada malam gilang-gemilang tersebut ialah Presiden Parti Keadilan Rakyat Datin Seri Dr. Wan Azizah Ismail yang menyatakann bahawa dakwaan UMNO yang mengatakan Pulau Pinang kini diambil oleh 'Cina' adalah melucukan.
"Dulu Koh Tsu Koon tu Melayu kah?" ujar beliau disambut tepukan dan sorakan hadirin.
"Kalau Melayu pun, apa yang kita mahukan ialah kepimpinan yang bersih dan berintegriti. Kalau kepimpinan Melayu pun rosak, tidak ada gunanya."
"Kita bukan lawan mereka yang lemah, tetapi kita melawan gergasi yang lama berkuasa."
"Siapakah yang telah menggadaikan dari3juta hektar tanah Melayu kepada hanya 1.7 juta hektar yang tinggal sekarang? Adakah DAP? Siapakah yang telah menghilangkan Bank Bumiputera, adakah DAP?"
"Dulu bila Lim Kit Siang dedahkan skandal Bank Bumiputera, mereka (UMNO) mengenakan dakwaan perkauman terhadap beliau seolah-olah ingin menjatuhkan kepentingan orang Melayu.
"Tapi kini, bila pegawai-pegawai audit yang terdiri dari orang Melayu sendiri yang mendedahkan penyelewengan kerajaan, mereka nak kata apa?" jelas beliau. -roketkini
Posted: 17 Jul 2012 10:30 PM PDT
Posted: 17 Jul 2012 08:28 PM PDT
Home Minister Hishammuddin Tun Hussein said today that the preliminary findings of the independent panel on Bersih 3.0 prove that there isaneed to findabalance between public freedom and maintaining public order.
While maintaining that none — including the police — would be spared if found to have broken the law, he said the violence only supported the Government's position on the need to have mass gatherings inacontrolled environment.
"We could see that emotions went out of control, and this applies both to the authorities and those assembled. That is why we suggested for it to be inastadium."
Hisham was commenting on news reports quoting panel chairman former IGP Tun Hanif Omar who said that low-ranking policemen had acted unprofessionally in handling the Bersih 3.0 crowd.
Hanif said Kuala Lumpur police chief Deputy Comm Mohmad Salleh testified that he had seen via monitors at the Bukit Aman control centre that some officers had acted unprofessionally.
The panel also saw police giving 'uncalled-for slaps' to protesters when viewing footage of the controversial rally last April 28.
Hanif was reported to have said the police had no standard operating procedure (SOP) in handling the media at the rally, where nearlyadozen pressmen on duty were assaulted and detained.
Hishammuddin urged the public to take an impartial view of the situation.
"I believe even the IGP won't condone such acts (by police officers). I only ask that everyone be fair and to not prejudice the findings of the panel," he said.
Hisham was very downright about it. I personally support any move by the authority and the government and even the Opposition to make public order as their top priority, especially at the time when Malaysia is faced with exploding issues like racism and religious cults.
I, however, do not agree with what Hanif said about the police. Anywhere in the world, including the US and Britain, the police will have to 'reciprocate' with the unruly protesters. Police or not, they are human with emotion and sentiment.
Yes, there are good and bad cops but how do we categorize the protesters who attacked the policemen?
The Opposition will makeabig noise over the injury sustained by some protesters but said nothing ifapolicemen dies in the hands of the protesters.
Hisham gaveagood point there...